Krita 3.0: inowanikwa nerunyararo rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yakasununguka yemahara software Krita yatosvika vhezheni yayo 3.0 uye inouya nenhau dzinonakidza, imwe yacho ichave inobatsira zvikuru kune vagadziri vanoda kushanda neiyi software, nekuti inosanganisira kutsigira kweanopopota. Krita 3.0 yakaburitswa neboka rekuvandudza munguva pfupi yapfuura uye neiyi nyowani yekumisikidza inovavarira kuzvimisikidza pachayo kupfuura nakare kose se software yehunyanzvi hwekugadzira uye kupenda kwedhijitari.
Iwe unofanirwa kunge uchitozviziva izvo Krita akaberekerwa muchipfuva che KDE, ikozvino yakasimbiswa seprojekti yakazvimiririra mukati meKDE nharaunda yekusimudzira, iine yayo repository kana Wiki, asi ichiri chirongwa chakabuda semubatsiri kune iyo KDE desktop nharaunda (ikozvino Plasma), semamwe maturusi mazhinji uye izvo zvakabatanidzwa. sechikamu chehofisi yeCalligra suite (yaimbove KOffice), yatakataura nezvayo uye iyo inokodzera kutaurwa zvakanyanya padyo neLibreOffice, nekuti kwandiri ivo vaviri veakakura ...
Iye zvino Krita 3.0 inowedzera matsva mashandiro, ine inovandudzwa interface iyo yakaendeswa kune Qt5 uye nerunyararo rutsigiro sezvatareva. Muchokwadi, ichi chikamu chekupedzisira chinokwezva kutarisisa, kubatanidza maturusi mazhinji atinogona kuwana mumadhoketi matsva uye izvo zvichatibvumidza kuti tigadzire nemifananidzo yedu, furemu neforamu, pamusoro pekupinza / kutumira kunze. yekuteedzana, uyezve kutamba munguva chaiyo.
Krita 3.0 yaida out-speed Adobe PhotoShop zvakare kana uchishanda nemakorani makuru. Ndosaka ichi chichiwedzera hunyanzvi hwekushanda nemifananidzo mikuru munzira inoyerera, senge kufanoona pakarepo. Pamusoro penyaya yezvikamu, basa rakawanda rakaiswa mukuita kuti zvive nyore kusarudza-kwakawanda kana kushandura zvivakwa zvavo pamwechete. Tsigiro yemifananidzo yeGIMP inosanganisirwa, tweaks mune mamwe maturusi ekuvandudza iwo, akagadziriswa bgus, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Krita 3.0: inowanikwa nerutsigiro rwehupenyu